Kedu ihe mbụ ị na-eme mgbe ị banyere n’ọfịs ahụ? Ị lelee ozi ịntanetị gị, nri? N’agbanyeghị na ọ bụ otu n’ime ihe ndị Intaneti kachasị ọhụrụ, e-post ka bụ otu ngwá ọrụ anyị na-eji kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ụzọ kachasị ike ma dị irè iji zụọ ahịa ndị ahịa gị.
N’ezie, dị ka ọtụtụ n’ime ndị ahịa ahịa kacha elu, e-post na-aga n’ihu överträffa mgbasa ozi mgbasa ozi na ọwa dị iche iche.
Ọ na-agbanwekwa. E kwuwerị, ndị debanyere aha gị bụ ndị gosipụtara mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. N’ọnwa gara aga, KeriLynn dere banyere otu esi eme mee ka ego jiri aka na listi e-post. Taa, aga m aga n’ihu, na-akọwa ụzọ isi bulie ndị na-edebanye aha gị ụgwọ. Ndị ọzọ debanyere aha ha, ndị ọzọ na-atụgharị, na ndị ọzọ ahịa.
Jag var inte likartad … "Ee, duh".
Ndekọ ozi e-post gị dị mma dịka ọdịnaya ị na-emepụta. Ị gaghị ekwenye ndị debanyere aha iji nyefee adreesị ozi-e ha n’enweghị ịfụ ha na nnukwu ọdịnaya. Ma ị gaghị edebe ha na listi gị ma ọ bụrụ na ịnweghị iwepụta ozi gị jupụtara na ihe bara uru. Nzọụkwụ otu na-eweta ihe ndị na-ama ama, ime ihe, na-akụzi, ma na-agwa ndị ọbịa gị. Mgbe ahụ, mgbe ị na-arịọ maka e-post ha, ha ga-enwe obi ụtọ ime otú ahụ.
Ị maara okwu a ‘ọ dị ntakịrị karịa’? N’ihe banyere ụdị ndebanye aha e-post, chefuo ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nnukwu idei mmiri nke ndị debanyere aha, ị ga-ebuwanye ibu ọnụ ọgụgụ gị. N’ezie, enwere ezigbo akara ịchọta – ị chọghị imejọ ndị ọbịa gị.
Ndị ọkachamara na Buffer na-agba ọsọ agbakwunye ụdị mpempe akwụkwọ e-post ọhụrụ itoolu ha na saịtị. Nsonazụ ahụ? Ha ejiri okpukpu abụọ tinye ọnụ ọgụgụ ha n’ime ọnwa.
Ihe ha na-ekpo ekpuchi b ‘HelloBar’- ụdị mpempe akwụkwọ nke na-ekpuchi na elu nke ebe nrụọrụ weebụ ha – na’ Slideup ‘- igbe ntinye nke gosipụtara mgbe onye ọbịa bịara karịa 60% a Ndị ọzọ nhọrọ ndị mmadụ debanyere aka, otú ahụ ka o yikarịrị ka ha ga-eme ya.
Ugbu a, ị na-emechi ihe gbasara ya na ihe mkpali. Ịbanye maka akwụkwọ akụkọ bụ mgbanwe. Ndị ọbịa gị chọrọ ihe na nloghachi. Ya bara, nya ha ihe ha na-apụghị iguzogide! Ụfọdụ echiche ndị a nwalere nke ọma gụnyere: ebook, akwụkwọ edemede na data na nchọpụta, ikpe na-enweghị n’efu, akwụkwọ ma ọ bụ broshuọ. Otú ọ dị, e nwere otu isi magnet nke na-ebugharị elu ma dị elu: ọdịnaya nweta nkwalite ‘. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa ma dị mkpa nke na-agbakwụnye uru nke blọọgụ gị dị.
Nkpọkọta gị nwere ike ime ma ọ bụ mebie mgbasa ozi ndenye aha gị. Nke a bụ bọtịnụ ‘denye aha’ gị. Ọ bụ nzọụkwụ ikpeazụ. Ị ghaghị ime ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee mmetụta ịmanye ya na ya. Enwere ihe atọ ebe a: agba, ntinye, na iṅomi. N’ihi na agba, elu, gula, na apelsiner na-arụ ọrụ nke ọma. Ha na-eji obi ike, na-adọrọ anya, ma dọta uche gị. Ị nwere ike ịga otu nzọụkwụ n’ihu ma mee ka ya na mmekọrịta. Nke a – ma ọ bụ akwụkwọ ochie – CTA bụ ezigbo ihe nlereanya. Ọ na-agbanwe webbplats na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụrụ na e kpuchiri ya – na-eme ka onye ọrụ ahụ gaa!
Banyere akwụkwọ ahụ, mee ka ọ dị mkpụmkpụ, nkọ, na isi. Ụfọdụ ndị ahịa na achọpụtala na iji ‘akpa’ mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma ebe a. GIF dị n’elu bụ ihe atụ ọzọ dị mkpa: "Nye m akụkọ efu ugbu a!" Karia "ibudata akụkọ gratis". O nwere ngwa ngwa na okwu na ndị ọbịa gị.
Ha na-echegbu onwe ha na ha abanyelarị na ọtụtụ ederede e-post. Ha na-atụ egwu na ị nwere ike iziga ha tọn spam na akwụkwọ ozi. Ọ bụrụ na ha bụ onye ọbịa ọhụrụ, ha na-echegbu onwe ha n’ihi na ha anụtụbeghị banyere gị. Igbu oge ahụ adịghị mfe, mana enwere ike ime ya. Malite site n’ịgwa ha kpọmkwem ihe ha ga-enweta mgbe ha debara aha ha. Buru uzo na imeghe. Ụgha ọzọ na-eji ‘ihe akaebe mmadụ’ gosi ha na ndị ọzọ na-atụkwasị gị obi. Nke a bụ ihe atụ dị mfe nke jikọtara usoro abụọ a:
Ihe mgbochi ikpeazụ iji debanye aha bụ ụdị ntinye akwụkwọ dị mgbagwoju anya na ogologo. Ụdị ihe odide gị adịghị mkpa ịjụ maka aha nwa agbọghọ nne gị na-agụ. Ọbụna ị chọghị ebe ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ. Mee ka ọ dị mfe. Mee ya ngwa ngwa. Ekwela ka ha nwee ohere igbanwe obi ha.
Maka weebụsaịtị ụfọdụ, ịrịọ maka aha mbụ bụ echiche bara uru. Ọ pụtara na ị nwere ike ịza ndị na-agụ akwụkwọ gị n’onwe gị na e-post n’onwe ya – nke na-emekarị ka mma ọnụego. Ma ọ dịghị ihe ọzọ achọrọ! Ọ bụghị naanị na ọ na-etinye oge na usoro ahụ, ọ nwere ike ịmalite ịnwe mkparịta ụka, nke nwere ike iweghachị ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-eji nzuzu ha egwu eg Ọnụ ọzọ na-eme ka ndị ọbịa gị ghara ịbanye gaa na ibe ọzọ iji banye. O kwesịrị ịdị mfe dị ka:
Emere ya n’ụzọ ziri ezi, ị ga-enwe ike ikwenye ma gbanwee na nanị sekọnd ole na ole. Ọ bụ ihe niile na-ewere ozi e-post nke ndị na-ege gị ntị ka ha na-enwe obi ụtọ maka ọdịnaya gị – tupu ha enwe ohere ịgbanwe obi ha. Cheta na, ndị ọzọ ị debanyere aha, ị ga-enwekwu ohere ịnweta ego. Ego dị na ndepụta! Olee aghụghọ na usoro ịchọtara dị irè maka ịba ụba nọmba gị?